‘गन्जी टोपी बाँडेर हाहाहुहु गर्दैनौँ’ « Loktantrapost
‘गन्जी टोपी बाँडेर हाहाहुहु गर्दैनौँ’
११ असार २०७४, आईतवार १०:४८
परिपक्व लेखकको रुपमा पहिचान बनाएका काँकरभिट्टाका एसपी लुइटेल मेचीनगर नगरपालिकाको निर्वाचनमा वडा नं. ६ मा नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट मुठ्ठी कसेको हात चुनाव चिह्न लिएर मतदाताको घरघरै पुगिरहेका छन् । लोकतन्त्र पोस्टले उनीसँग लिएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ–
हाम्रो चुनावी अभियान तीब्र छ । असार १४ गतेको चुनावको निम्ति निर्वाचन आयोगले असार ६ गते साँझ मात्र चुनाव चिह्न दिएको हुँदा प्रचार प्रसारका निम्ति हाम्रो हातमा केबल चार÷पाँच दिन मात्रै रह्यो । तसर्थ चिन्ह प्रचार र उम्मेदवारहरुको परिचय अभियान तीब्र छ । तर अरुहरुको जस्तो गन्जी टोपी बाँडेर हाहाहुहु गर्ने अभियान हाम्रो छैन ।
मतदाताहरु समक्ष तपाइँ र तपाइँको पार्टीले के कस्तो बाचा गरेको छ ?
यो उत्तम प्रश्न हो । मतदाता सामु हामी र हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने बाचा गरेका छौँ । साथै, सदाचार, सुशासन र समावेशिताको जगबाट समृद्धिका उपायहरुको तथ्य र योजना अघि सारेका छौँ ।
तपाइँको पार्टी अरु भन्दा के कारणले नयाँ शक्ति हो ?
अरु पार्टीहरुको चालचलन, हाउभाउ, संस्कार आदि पुरानै छ । भोटका निम्ति ‘जस्तो सुकै’ मार्गमा हिँडेका छन् । नयाँ शक्तिले त्यो संस्कारको बिरोध गर्छ । आम मतदाताको विचार, विवेक र कर्तव्यको कुरा प्रचार अभियानमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ । र, यो वैकल्पिक राजनैतिक पार्टी हुनाले पनि अरुभन्दा नयाँ छ । अरुहरु कुरा मात्र गर्छन्, हामीसँग पूरा गर्छौँ ।
नयाँ शक्तिको चुनाव चिन्ह किन स्वतन्त्र भएको ?
प्रश्न गम्भीर छ । डा.बाबुराम भट्टराई संयोजक भएको पार्टी नयाँ शक्ति पार्टीको दर्ता भएको चिह्न आँखो हो । प्रचण्ड सरकार लगायत काङ्ग्रेस र एमालेको सिन्डिकेट, भनौँ अथवा संसदको तीन दलीय संयन्त्रले अध्यादेश नै जारी गरेर आयोगलाई आँखा चिह्न नदिनु भन्यो । संसद बाहिर भएका दललाई स्वतन्त्र चिह्न दिनु भन्ने यो सिन्डिकेटको आदेशका कारण हाम्रो चिह्न स्वतन्त्र भएको हो ।
तपाइँलाई मतदाताले रोज्नु पर्ने कारण के के हुन सक्छ ?
राजनैतिक पृष्ठभूमिमा म नयाँ छु । १२ वर्षसम्म शिक्षण पेशामा रहेर र लेखकका रुपमा समाजमा देखिएका अनेक असमानताबारे लेखेर आवाज उठाएको छु । नितान्त जनपक्षीय काम हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुँदा मतदाताले मलाई रोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
चुनावमा पहिल्यैदेखि लडिरहेका शक्तिसँगको प्रतिष्पर्धामा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
मलाई बडो विचित्र महसुस भइरहेछ । काछी, गन्जी, टोपी, बाँडेर यहाँ त आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरिहेछन् । पुराना शक्तिहरुको पुरानै चेतनाले पुरानै पाराले मतदातालाई कहिले सचेत पार्ने ? मतदातालाई सचेत पार्नुको सट्टा विचेत पार्ने काम जो छ बडो विचित्र छ । हामीसँग भीड होइन, एजेन्डा छ ।
तपाइँको सङ्गठन बलियो देखिएको छैन । एजेन्डाकै आधारमा मात्र भोट आउला जस्तो लाग्छ ?
भोट आउनु— नआउनु, हार्नु—जित्नु दोस्रो कुरा हो । सङ्गठन त बलियै छ । पहिलो त, प्रतिष्पर्धामा उत्रिनु मुख्य कुरा हो । आफ्ना सही र आवश्यक एजेण्डा मार्फत जितिए सत्तापक्षको काम गरिन्छ । हारिए प्रतिपक्षमा बसेर काम गराइन्छ ।
अन्य प्रतिष्पर्धी र आम मतदाताहरुलाई के आग्रह गर्न चाहनु हुन्छ ?
स्वस्थ र सुन्दर प्रतिष्पर्धा गराँै भन्छु प्रतिष्पर्धीहरुलाई । र, मतदातालाई, सचेत योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई भोट हालेर छानौँ भन्छु ।